1 Mfiase+ no na Asɛm+ no wɔ hɔ, na Asɛm no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ,+ na Asɛm no yɛ onyame.+ 2 Oyi na mfiase+ no na ɔne Onyankopɔn wɔ hɔ.+ 3 Nneɛma nyinaa nam no so na ɛbae,+ na ade biako mpo ankwati no amma. Nea ɛbae a 4 ɛnam no so no yɛ nkwa,+ na nkwa no ne nnipa hann.+ 5 Na hann no hyerɛn esum+ mu, na esum no ntumi mmunkam so. 6 Ɔbarima bi bae a Onyankopɔn somaa no sɛ ne nanmusini:+ na ne din de Yohane.+ 7 Ɔbarima yi baa adansedi,+ sɛ ɔrebedi hann no ho adanse,+ na nnipa ahorow nyinaa nam no so agye adi.+ 8 Ná ɛnyɛ ɔno ne hann no,+ na mmom ɔbae sɛ ɔrebedi hann no ho adanse.+ 9 Ná nokware hann+ a ɛhyerɛn+ ma nnipa ahorow nyinaa+ no rebɛba wiase. 10 Ná ɔwɔ wiase,+ na wiase nam no so na ɛbae,+ nanso na wiase nnim no. 11 Ɔbaa n’ankasa ne kurom, nanso n’ankasa nkurɔfo annye no.+ 12 Na dodow a wogyee no no,+ wɔn na ɔmaa wɔn hokwan sɛ wɔmmɛyɛ Onyankopɔn mma,+ ne din a wogye dii nti;+ 13 na emfi mogya anaa nea ɔhonam pɛ anaa nea ɔbarima pɛ mu na wɔwoo wɔn, na mmom efi Onyankopɔn.+ 14 Enti Asɛm no bɛyɛɛ ɔhonam+ bɛtenaa yɛn mu, na yehuu n’anuonyam sɛ anuonyam a agya de ma ne ba a ɔwoo no koro;+ na adom ne nokware hyɛɛ no ma.+ 15 (Yohane dii ne ho adanse, yiw, ɔteɛɛm ankasa​—oyi ne nea ɔkae​—sɛ: “Nea odi m’akyi reba no adi m’anim efisɛ na ɔwɔ hɔ ansa na mereba.”)+ 16 Adom a ahyɛ no mã+ nti, yɛn nyinaa anya adom pii+ afi ne hɔ. 17 Esiane sɛ wɔnam Mose so na wɔde Mmara no mae+ nti, wɔnam Yesu Kristo so na wɔde adom+ ne nokware+ mae. 18 Onipa biara nni hɔ a wahu Onyankopɔn pɛn;+ onyame+ a wɔwoo no koro a ɔda Agya no kokom no,+ ɔno na wakyerɛ sɛnea Agya no te.+ 19 Eyi ne adanse a Yohane de mae bere a Yudafo no somaa asɔfo ne Lewifo fi Yerusalem baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ: “Woyɛ hena?”+ no. 20 Na ɔpaee mu kae a wansan; ɔpaee mu kae sɛ: “Ɛnyɛ mene Kristo no.”+ 21 Ɛnna wobisaa no sɛ: “Ɛnde na woyɛ hena? Wone Elia anaa?”+ Na ɔkae sɛ: “Ɛnyɛ mene no.” “Wone Odiyifo no?”+ Ɛnna obuae sɛ: “Dabi!” 22 Enti wobisaa no sɛ: “Woyɛ hena? na yennya mmuae bi nkɔma wɔn a wɔsomaa yɛn no. Ɛdɛn na woka fa wo ho?”+ 23 Ɔkae sɛ: “Mene nea ne nne reteɛm wɔ sare so sɛ, ‘Momma Yehowa kwan nteɛ,’ sɛnea odiyifo Yesaia kae no.”+ 24 Nso na wɔn a wɔsomaa wɔn no fi Farisifo mu. 25 Enti wobisaa no sɛ: “Sɛ ɛnyɛ wone Kristo anaa Elia anaa Odiyifo no a, ɛnde adɛn nti na wobɔ asu?”+ 26 Yohane buaa wɔn sɛ: “Me de, mebɔ asu nsu mu. Nanso obi gyina mo mfinimfini+ a munnim no,+ 27 nea odi m’akyi no, na mensɛ mpo sɛ mesan ne mpaboa hama.”+ 28 Eyinom sii wɔ Betania wɔ Yordan agya, baabi a na Yohane rebɔ asu no.+ 29 Ade kyee no, ohui sɛ Yesu reba ne nkyɛn, na ɔkae sɛ: “Hwɛ, Onyankopɔn Guammaa+ a oyi wiase bɔne fi hɔ no ni!+ 30 Oyi ho asɛm na mekae sɛ, ɔbarima bi di m’akyi reba a wadi me kan, efisɛ na ɔwɔ hɔ ansa na mereba.+ 31 Me de, na minnim no, nanso nea enti a mebɛbɔɔ asu nsu mu ne sɛ wobeyi no adi akyerɛ Israel.”+ 32 Yohane dii adanse nso sɛ: “Mihuu honhom no sɛ ɛresian sɛ aborɔnoma fi soro, na ebesii no so.+ 33 Me de, na minnim no, nanso Onii a ɔsomaa me+ sɛ memmɛbɔ asu nsu mu no ankasa ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Nea wubehu sɛ honhom no asian abesi no so no, ɔno ne nea ɔbɔ asu honhom kronkron mu no.’+ 34 Na mahu adi ho adanse sɛ oyi ne Onyankopɔn Ba no.”+ 35 Ade kyee bio no, na Yohane ne n’asuafo baanu gyina hɔ, 36 na ohui sɛ Yesu nam hɔ no, ɔkae sɛ: “Hwɛ, Onyankopɔn Guammaa+ no ni!” 37 Na asuafo baanu no tee nea ɔkae no, na wodii Yesu akyi. 38 Afei Yesu dan ne ho, na bere a ohui sɛ wodi n’akyi no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛdɛn na mohwehwɛ?” Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Rabi (a ne nkyerɛase ne Ɔkyerɛkyerɛfo,) ɛhe na wote?” 39 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommra na mubehu.”+ Enti wokohuu baabi a ɔte, na wɔtenaa ne nkyɛn saa da no; na ɛbɛyɛ dɔn a ɛto so du.* 40 Na Simon Petro nua Andrea+ yɛ baanu a wɔtee nea Yohane kae na wodii Yesu akyi no mu biako. 41 Nea edi kan no, ohuu n’ankasa ne nua, Simon, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛahu Mesia no”+ (a ne nkyerɛase ne Kristo).+ 42 Odii n’anim kɔɔ Yesu nkyɛn. Bere a Yesu hwɛɛ+ no no, ɔkae sɛ: “Wone Simon,+ Yohane ba;+ wɔbɛfrɛ wo Kefa” (a ne nkyerɛase ne Petro).+ 43 Ade kyee no, Yesu pɛe sɛ ofi hɔ kɔ Galilea. Na ohuu Filipo+ ka kyerɛɛ no sɛ: “Bedi m’akyi.”+ 44 Na Filipo fi Betsaida,+ Andrea ne Petro kurom. 45 Filipo huu Natanael+ na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛahu nea Mose kyerɛw ne ho asɛm wɔ Mmara no mu+ na Adiyifo+ no nso kyerɛw ne ho asɛm no, Yesu, Yosef ba+ a ofi Nasaret no.” 46 Nanso Natanael bisaa no sɛ: “Biribi pa bi betumi afi Nasaret aba?”+ Filipo ka kyerɛɛ no sɛ: “Bra bɛhwɛ.” 47 Yesu hui sɛ Natanael reba ne nkyɛn, na ɔka faa ne ho sɛ: “Hwɛ, Israelni ankasa a nnaadaa nni ne mu ni.”+ 48 Natanael bisaa no sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na wuhuu me saa?” Yesu buaa no sɛ: “Ansa na Filipo refrɛ wo, bere a wowɔ borɔdɔma dua no ase no na mihuu wo.” 49 Natanael buaa no sɛ: “Rabi, wone Onyankopɔn Ba no,+ wone Israel Hene.”+ 50 Yesu buaa no sɛ: “Esiane sɛ meka kyerɛɛ wo sɛ mihuu wo wɔ borɔdɔma dua no ase nti na wugye di? Wubehu nneɛma akɛse a ɛsen eyinom.” 51 Ɔtoaa so ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, mubehu sɛ ɔsoro abue, na Onyankopɔn abɔfo+ redi aforosian onipa Ba no so.”+
^ Bɛyɛ anwummere nnɔn 4.